| | Affichages : 18634
Raha nankalazaina tamin’ny faha 26 oktobra 2017 ny andro maneran-tany ho an’ny fanasana tànana amin’ny rano sy savony teto anivon’ny faritra Vakinankaratra. Ny 31 oktobra 2017 kosa no nanatanterahan’ny SAF/FJKM izany tany amin’ny Kaominina Ambanivohitra Ambohiborona, Distrikan’I Faratsiho. Toerana iasany amin’ny alalan’ny famatsiana rano fisotro madio, fampiroboroboana ny fahadiovana sy ny fidiovana.
Ny 15 oktobra no andro fankalazana maneran-tany ny fanasana tànana amin’ny rano sy savony. Fihetsika tsotra ilaina fahazarana, satria miantoka ny fahadiovana sy ny fahasalamana. Fantatra manko fa noho ny fanaovana tsinotsinona io fomba tsotra io dia zaza latsaky ny 5 taona maherin’ny 3,5 tapitrisa isan-taona maneran-tany no mamoy ny ainy tsy fidiny. Antony, noho ny aretin-kibo sy ny aretin’ny taovam-pisefoana. Mampihena ny taham-pafatesana vokatry ny aretim-pivalanana hatramin’ny 50% sy ny taham-pahafatesana vokatry ny aretin’ny taovam-pisefoana hatramin’ny 25% anefa ny fanasana tànana amin’ny savony.
Nosafidiana ho amin’ity taona ity ny lohahevitra hoe: “Ny tanantsika madio, ny hoavintsika mamiratra” mba hanamarihana ny fankalazana. Ny fahadiovana tokoa manko dia mariky ny fandrosoana sy miantoka ny ho avy lavorary. Ny sekoly ambaratonga fototra no nosafidiana manokana hanatanterahina ny hetsika toy ny EPP Antsonjorano, Kaominina Ambanivohitra Ambohiborona noho ny maha-toeram-panovozam-pahalalana azy. Ankoatra ny kabary nifandimby nisy ny fanentanana maro samihafa: dihy sy fampisehoana ary koa ny fifaninanana nampanaovina ny ankizy mpianatra nanasongadinana ny fanasana tànana amin’ny rano sy savony. Nisy ihany koa ny fampirantiana an-tranoheva nanehoana ny asa efa vita teo anivon’ny Kaominina. Marihina fa ny hetsika toy ireny dia efa fanaon’ny SAF/FJKM isaky ny toerana iasàna. Ary anamafisana indrindra ny fiantomorana ny ankizy eo amin’ny fiarahamonina. Natao hanentanana ny ankizy aloha. Avy eo, izy indray no mampita hafatra any amin’ny tokantrano sy ny fiarahamonina misy azy. Isan’ny ivon’ny hetsika ny seresera indroa miatoana.
Anisan’ny zava-dehibe ao anatin’ny tetikasa sahanin’ny SAF/FJKM Antsirabe ny “fidiovana” ka izany no mahatonga ny fanamafisana ny fampiroboroboana izany amin’ny alalan’ny fananganana fotodrafitrasa fanasana tànana. Voakasika amin’izany ny sekoly miisa 10 amin’ity taom-piasana 2017-2018 ity. Marihina fa EPP nampiantrano ny hetsika dia efa tafiditra tanteraka ao anatin’ny fampiharana ny fanasana tànana amin’ny rano sy savony. Satria efa nisitraka rahateo ny fotodrafitrasa natsangan’ny SAF/FJKM tamin’ny taom-piasana voalohany 2016-2017 tao amin’ny kaominina ambanivohitra Ambohiborona.
Dihy mirindra nataon’ny mpianatra EPP Sabotsy Ivory Antsirabe
Raha hiverenana ny fankalazana teo anivon’ny faritra dia nandray anjara feno tamin’izany ireo mpisehatra amin’ny Rano Fanadiovana sy Fidiovana ireo. Isan’izany, ny ONG EAST, CITE, ONG Miarintsoa ary ny SAF/FJKM Antsirabe. Nitarika ny hetsika hatrany ny Fiadidim-paritry ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoran’afo Vakinankaratra. Tao amin’ny EPP asabotsy Ivory Antsirabe no notanterahina ny fankalazana. Ary nanamarika izany ny fanokanana fotodrafitrasa: ny toeram-pivoahana sy fanasana tànana navaozina nataon’ny ONG EAST Antsirabe ho an’ny sekoly.
Tsy nandalo fotsiny ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny fanasana tànana amin’ny rano sy savony raha ho an’ny faritra Vakinankaratra sy ny Distrika Faratsiho tamin’ity taona ity. Niezaka nampita ny hafatra sy ny fanentanana tamin’ny fomba maro samihafa ny mpiantsehatra rehetra amin’ny Rano Fanadiovana sy fidiovana teo anivon’ny faritra. Indrindra fa ny SAF/FJKM. Ny tanjona: hananan’ny olona tsy ankanavaka fahazarana manasa tànana. Ho an’ny ankizy dieny amin’ny fahazazany sy ho an’ny lehibe ihany koa. Izany indrindra no zava-kendrena sy antom-pisian’ny SAF/FJKM araka ny teny filamatra manao hoe: “Miasa hanandratra ny maha olona”.